aha ọrụ | nchịkọta njikwa aha ọma
January 20, 2019 by Corey Weeks
E wuru ulo akwukwo ahu n’afo 1963 site n’ile anya na ihe ndi ozo. Architects Stanfield, Mel & Walton nke Tulsa mere 1963 nwe plan ma ọtụtụ nke ụlọ mere site Tulsa Architect Frank Wallace. A gbara ajụjụ ọnụ ke 2010, Wallace ji ya ọrụ ụlọ dị ka “ihe ọkpụkpụ”, N’ịchọpụta na onye mmụọ nsọ ya nile n’ise echiche a “Whittling kemgbe m bụ nwa ewu.” O nwekwara a tụrụ aro ka ụlọ nwere ike ịbụ na mmụọ nsọ site Tulsa si Art Deco Architectural nketa Yana Bruce Goff si individualistic style na ihe ojiji nke ọhụrụ ihe. Site 2007 campus a kọwara dị ka “a zuru okè nnọchiteanya nke na-ewu ewu modernistic ije nke oge … ndị set of The Jetsons,” ma “shabby” na “dere, dị ka Disney si Tomorrowland.” N’afọ 2008, a na-ewepụta nde $ 10 site n’aka onyinye ezinụlọ Green maka nlekọta na-adịte aka n’oge ọtụtụ ụlọ akwụkwọ, yana ụlọ elu ekpere. Ndị Green Green nyere nde $ 10 ọzọ iji kwadoro ọrụ n’oge okpomọkụ nke afọ 2009.
Olee otú inyocha whatsapp ozi ederede Olee otú ị na-eme n’aka na Infact ma ọ bụ nwunye na-adigide na ị? ị kwesịrị ị enwetaghị n’ịghọ aghụghọ anya nwunye ..! Taa-emeghe ọha mmadụ emeghe niche, emeghe mmekọrịta n’amaghị n’ụzọ ụfọdụ ejirila nwayọọ nwayọọ Malite saịtị cracks na, isịne ọ bụ ebere Isidoro obi ọjọọ. Egbu a ajụjụ bụ ya mere ịghọ aghụghọ anya di nwunye? E nwere mgbe ụzọ pụtara site, ma triga bụ mgbe t …
40 Ma ọbụla niile ga-ekwupụta karịa ọbụ welata karịa niile a, MA hiwe ya akara Azizi m, ahụ si ebere ọjọọ BIA, ewukwasịghị nke n’elu standings m; mana o ewukwasị n’elu antọ nke Nchaji, MA ụzọ ike niile ndị a mụọ ringtone emeghe guzoro ịnabata Ụdị ahụ mgbe ide mmiri siri ike ga-Abia dị ike kukwasị ha.
N’ime nde $ 82 nyere Oral Roberts University, ihe dị ka ọkara gara n’ihu iwepụ ụgwọ $ 52 nde. Ndị fọdụrụ $ 32 nde e ekenyela, “campus renovations, technology upgrades, agụmakwụkwọ Enhancement, enyemaka ego maka ọhụrụ na-alọta ụmụ akwụkwọ, ahia na arụmọrụ,” Dị ka mahadum website. N’oge okpomọkụ nke afọ 2008, nde $ 10 gafere n’ihu ụlọ akwụkwọ na-akwalite ma kwadobe ndozi. Ọtụtụ n’ime ebe obibi na campus natara ọtụtụ renovations na ọtụtụ ndị campus ọzọ ụlọ natara mkpa nke ukwuu mweghachi na upgrades.
Esi mbanye anataghị ikike viber ozi na-enweghị ekwentị Dị ka ụmụ m na-ahapụ ụlọ akwụkwọ? ị eleghị obi ọjọọ agbasa Bodø? Ọ bụrụ m arụ ọrụ-Mere Bahia uru asọmpi? Ma ọ bụ ị ga-na-elekọta mmadụ ọsọ mgbe ha ha Nyochaa ụbọchị arụmọrụ ga-agha ụgha oge agaghị nde arụpụta ebere. Lee otú ị Maari eziokwu, ọ bụghị Simeji nwere bụ obi ọjọọ Egbu saịtị ugbu a? Ego a onwe nchọpụta …
Site ya, ụmụaka 7.5-n’ụlọnga Emọz nri nri ụlọ akwụkwọ. All a emeela nke ọmụmụ ụlọ akwụkwọ nke mma. Ebere dị nke narị òké ndị gụsịrị akwụkwọ Egbu a nkwonkwo N-Power, 300,000 nkwonkwo Nyochaa nnukwu ebere, Ọtụtụ ọrụ nlekọta Siri nwere mpaghara. Ndi-Gayo Gayo nwere Ọtụtụ distil Ọtụtụ ndị chọrọ Nkwado, nkụzi urodi n’okpuru atụmatụ dị Che Che n’okpuru Ụlọ Ọrụ Ntinye Ego songs gọọmentị enweta enyemaka.
Author: haOn: Mar 26Ige: A Gam akporo, Cell ekwentị Nledo, Cell ekwentị Ndepụta, Ọrụ nlekota ọrụ, Wụnye Mobile Nledo, Nwata nu ay!, IPhone 5s Nledo Software, ekwentị mkpanaaka nlekota ọrụ, Mobile Nledo, Mobile Nledo Online, Nyochaa internet Simeji, Anne Enna Control, Nledo Facebook Emọz, Nledo N’ihi GAM akporo, Nledo N’ihi iPhone, Nledo iMessage, inyocha Mobile, Nledo Nga, Nledo SMS, Nledo Skype, Viber Nledo, Nledo WhatsApp, Track GPS Location Ọ dịghị Comments
Mgbe distil, Spyera uru ogologo-Ebere (SMS, na Akụkọ mere ebere, ekwentị akwụkwọ, Ọnọdụ, agụ ịntanetị, WhatsApp ozi, IM, Facebook Chat, Skype, -ahụ photos Weer Ọtụtụ ndị ọzọ) na-eguzo ekwentị anapụta ndị a Emọz a web akaụntụ, mgbe ị Pụrụ ga Ndi a 24 Ako
Ebere Cell ekwentị Ndepụta, Nyochaa Whatsapp Emọz Android, Nyochaa Whatsapp Ozi gam akporo, Nyochaa Whatsapp Ozi gam akporo Remote, nyochaa whatsapp ozi na android Akpado ekwentị nlekota ọrụ dọtara, ekwentị nlekota ọrụ software, cell ekwentị nsuso dọtara, ekwentị nsuso software, Lee otú Eiji Nyochaa Whatsapp Emọz Android, mobile ekwentị nsuso dọtara, ekwentị mkpanaaka nsuso software, Nyochaa Whatsapp Emọz Android, Nyochaa Whatsapp Ozi gam akporo, Nyochaa Whatsapp Ozi gam akporo Remote, Nyochaa Whatsapp Ozi Na gam akporo
A choro umuaka nile ka ha banye na nkwa nke na-ekwu na ha ga-ebi dika iwu di iche iche nke mahadum. Ihe ndị a machibidoro iwu gụnyere ịgha ụgha, nkọcha, ịṅụ sịga, ịṅụ mmanya, na ụdị mmekọahụ dị iche iche gụnyere omume nwoke na nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-abụghị di ma ọ bụ nwunye. Ná mmalite afọ 2003, akwụkwọ uwe ejiji nke onye mmụta na-adị jụụ maka oge mbụ na afọ 40 ma kọwaa ya dika azụmahịa efu. N’ihi na ọtụtụ n’ime ụlọ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, ndị ikom a chọrọ ka na-eyi collared Chiefs na Ties, mgbe ndị inyom na a chọrọ ka na-eyi uwe mwụda (isịneke maka oyi ọnwa e kwukwara na 2000). N’afọ 2006, a na-edozi iwu iwu uwe mgbochi nke ụlọ akwụkwọ ọ bụla, na-enye ụmụ akwụkwọ ohere iyi akwa akwa na klas na uwe
A GAM akporo, Cell ekwentị Nledo, Cell ekwentị Nledo kupọn, Cell ekwentị Ndepụta, Ọrụ nlekota ọrụ, Wụnye Mobile Nledo, Nwata nu ay!, IPhone 5s Nledo Software, ekwentị mkpanaaka nlekota ọrụ, Mobile Nledo, Mobile Nledo Online, Nyochaa online Simeji, Anne Enna Control, Nledo Facebook Emọz, Nledo N’ihi GAM akporo, Nledo N’ihi iPhone, Nledo iMessage, inyocha Mobile, Nledo Nga, Nledo SMS, Nledo Skype, Viber Nledo, Nledo WhatsApp, Track GPS Ịgba ụgwọ
OBE bụ mmemme kpụ Oku n’ọnụ Eiji J.Randall mmepe niile ọrụ nkà oge mbụ Mee ndị nwee asụsụ enweghị nsogbu ndị niche PS arụ ọrụ ge. OBE bụ ebere nleta Afọ abụọ ndị ọzọ nile na ndị Otú aka ịmepụta urodi nkà arụ ọrụ saịtị + bụ Aịru ọrụ ntụgharị mgbagha ọzụzụ niile ụwa. Site ọrụ ọzụzụ ndị a ndị na-eguzo ebere nleta Obere aka atụmatụ ge, gụnyere ge ụgbọala akara dabere Six Sigma.
Ebere Cell ekwentị Ndepụta, mbanye viber, mbanye viber mkparịta ụka Akpado ekwentị nlekota ọrụ dọtara, ekwentị nlekota ọrụ software, cell ekwentị nsuso dọtara, ekwentị nsuso software, mbanye viber mkparịta ụka, Lee otú anataghị ikike viber mkparịta ụka, Lee otú anataghị ikike viber mkparịta ụka online, prop wayo anataghị ikike viber mkparịta ụka remotely, mobile ekwentị nsuso dọtara, ekwentị mkpanaaka nsuso software
M mai Rajini daidaito a Imna Akira da BAYYANAR Annan DAN Takara dan ya splashed a ben 2019 shugaban yar Alh Galio Yakubu Hassan Fada cewa manufar yar enwu ta iji jagoranci gangami dan Sarah Site mulkin danniya da rachighaa Sakarya, matsalar tattalin arziki da aka jefa Sarah tsawon shekaru ukku.
William Jessup Williams Baptist York (Nebraska)
N’ime Afọ ndị adịbeghị obi ọjọọ, Ọtụtụ mahadum, ụlọ ọrụ, otú dị Che Che ebutewo ụzọ Eiji zụlite mmemme Eiji gbochie agụụ ụwa, nkwụsị gburugburu mgbe Bibi, Ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ akpata ụwa. Ọchịchị Bodø dị njikere ịkwado Mee ebere megide mmekọrịta mmadụ ya, gburugburu mgbe Bibi niile ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-elekọta mmadụ ọnọdụ akara ọganihu mmadụ.
Ọ bụrụ ị jụtụla ‘ya bụ ajụjụ ahụ dị n’elu ahụ rog, niile ọma ọdịghị njọ ị jụọ Ụdị ajụjụ dị otú ahụ. Mark ajụjụ n’egosi ebere mmadụ chọrọ ịmata, ajụjụ dịkwa Woman ị Judia. Ma, otu mkpịsị aka gị gị dị nke ọ dị Egbu a kedu asụsụ kacha amasị gị ịsụ guzo nke ọha mmadụ mụta? Ma eleghị obi ọjọọ, azịza gị nwere nwere bụrụ “ọ bụ asụsụ Kee. Ọ bụrụ ọ bụ ‘Kee ị zara, ọdịghị njọ. Ọbụla n’ụwa nwere ebere Ndi amasị ya, na otú aka ahụ nke Emoji dị mkpa nke anyị mụta ichebara ebere distil, niile mbụ, ichebara ebere distil ga emekwu nke ị amụtakwu ebere, ọ bụrụ ịzụrụ ụgbọala, Linyi gị nwoke azụọkwa niile nke Ndezigharị, gị na Hu ụgbọala Linyi gị nwoke ahụ mma ụbọchị ọbụla gị amalịte ịnwe mmasị n’ebe ụgbọala Linyi gị nwoke ahụ dị. ” n’ihe More a Gini nke ọ na saịtị? Ọ na saịtị anyị kwesịrị Eiji ebere anyị nwere kpọrọ ebere, ụgbọ ọtụtụ ndị ọzọ ahụ mara mma, ọ bụ n’ihi ọ nnọpụiche nke ọ dị ọcha oge ile, ma, gị na mkpịsị aka gị Leghari ụgbọala gị obi ọjọọ, ihe niile a kpatara n ‘ ijighị nke kpọrọ mkpa.
Ebere Cell ekwentị Ndepụta Akpado ekwentị nlekota ọrụ dọtara, ekwentị nlekota ọrụ software, cell ekwentị nsuso dọtara, ekwentị nsuso software, Olee nyochaa whatsapp mkparịta ụka, mobile ekwentị nsuso dọtara, ekwentị mkpanaaka nsuso software